अवास्टलाई कसरी अक्षम गर्ने ताकि यो तपाईलाई दु: ख गर्दैन मोबाइल फोरम
अवास्टलाई कसरी असक्षम पार्ने ताकि यसले तपाईंलाई कष्ट दिँदैन
डेनियल टेरासा | | इन्टरनेट, सुरक्षा
avast यो लगभग million०० मिलियन प्रयोगकर्ताको साथ संसारमा दोस्रो सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने नि: शुल्क एन्टिभाइरस हो। सत्य यो हो कि यो सफलता आकस्मिक होइन, तर कामको नतीजा अवास्ट चेक गणतन्त्रमा 400 ० को दशकको शुरुमा शुरु भयो। निस्सन्देह, यो एक हो उत्तम नि: शुल्क एन्टिभाइरस संसारको। त्यसो भए, यस्तो राम्रो उत्पादन हुनु, तपाईको कम्प्युटरमा अवास्ट असक्षम पार्नुपर्ने के कारण छ?
अन्य धेरै सुविधाहरू मध्ये, अवास्ट (एक्रोनिमको लागि एन्टि भाइरस उन्नत सेट) खराब प्रोग्रामहरूका लागि स्क्यान गर्दछ, ransomware पत्ता लगाउन सक्दछ र हाम्रो WiFi नेटवर्क विश्लेषण गर्न सक्षम छ। एन्टिभाइरस वा साधारण «ढाल than भन्दा बढि, यो हो हाम्रो कम्प्युटि devices उपकरणहरूको लागि एक पूर्ण र अत्यधिक प्रभावी सुरक्षा प्रणाली। तर निस्सन्देह, यी सबै कार्यहरूको लागि धेरै स्रोतहरू आवश्यक पर्दछ र गर्न सक्दछ हाम्रो उपकरणहरू ढिलो र कम कुशलतापूर्वक चलाउनुहोस्।
त्यसो भए, आजको पोष्टमा, हामी विकल्पहरू बताउन गइरहेका छौं अवास्ट अक्षम गर्नका लागि अवस्थित छन्, कि त अस्थायी रूपमा वा स्थायी रूपमा। हामी विकल्पहरू पनि देख्दछौं जुनका लागि अवस्थित छ केहि विशिष्ट प्रकार्यहरू अक्षम गर्नुहोस् यस एन्टिभाइरसको, घटनामा हामी केहि राख्न चाहन्छौं र अरुसंग वितरण गर्छौं।
1 अस्थायी रूपमा अवास्टलाई कसरी असक्षम गर्ने
2 कसरी एक विशिष्ट अवास्ट ढाल असक्षम गर्ने
2.1 अस्थायी रूपमा
2.2 निश्चित रूपमा
3 शिल्डहरूको संवेदनशीलता परिमार्जन गर्नुहोस्
अस्थायी रूपमा अवास्टलाई कसरी असक्षम गर्ने
सबैभन्दा पहिले हेरौं के गर्ने हो अवास्ट शिल्डहरूका सबै सेटहरू अस्थायी रूपमा असक्षम गर्नुहोस्। त्यसो गरेर, हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौं कि एन्टिभाइरसले हाम्रो उपकरणहरूसँगै कुनै पनि आपरेशनमा हस्तक्षेप गर्दैन।
यस बिन्दुमा नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जोखिम जसमा अवास्ट पूर्ण रूपमा असक्षम पारिएको छ, यो अस्थायी रूपमा मात्र भए पनि। यो कार्यले हाम्रो टोलीलाई पूर्ण असुरक्षित छोड्छ, त्यसैले हामी लिने चरणहरूमा हामी होशियार हुनुपर्दछ।
अस्थायी रूपमा अवास्ट अक्षम गर्न, यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
टास्कबारमा, फेला पार्नुहोस् avast आइकन। यो यसको हडताएको सुन्तला रंगले चिन्न धेरै सजीलो हुन्छ।
दायाँ माउस बटनको साथ प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस्। कार्यहरूको सूची प्रदर्शित हुनेछ। हामी विकल्पको छनौट गर्नेछौं "अवास्ट शिल्ड नियन्त्रण"। हामीलाई एन्टिभाइरसको असक्रियताको अवधिसँग सम्बन्धित धेरै विकल्पहरू देखाइनेछ:
१० मिनेटका लागि असक्षम गर्नुहोस्।
एक घण्टा असक्षम गर्नुहोस्।
कम्प्युटर फेरि सुरु नभएसम्म असक्षम गर्नुहोस्।
स्थायी रूपमा अवास्ट अक्षम गर्नुहोस्।
महत्वपूर्ण: यदि छनौट गरिएको विकल्प सूचीमा अन्तिम एक हो (स्थायी रूपमा निस्क्रिय गर्नलाई एक), अव्यस्ट फंक्शनहरू पुन: सक्षम गर्नको लागि हामीले यसलाई मेनुअल्ली गर्नुपर्नेछ।
कसरी एक विशिष्ट अवास्ट ढाल असक्षम गर्ने
राम्रोसँग सोच्नुहोस्, अवास्ट पूर्ण रूपमा असक्षम पार्नुको सट्टा, यो छनौट गरिएको र मात्र हुन धेरै बुद्धिमानी हुन्छ हामीलाई चाहिने एन्टिभ्रसको शिल्ड वा कार्यहरूमा परिवर्तन गर्नुहोस्, बाँकी सञ्चालनमा छोड्नुहोस्। यस तरिकामा, सुरक्षाको पूर्ण अभावको स्थिति जुन हामीले अघिल्लो सेक्सनमा उल्लेख गर्छौं उत्पन्न हुँदैन।
पहिले जस्तै, तपाईं अस्थायी वा स्थायी रूपमा एक अवास्ट शिल्ड पनि निस्क्रिय गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हेर्नेछौं कि यो कसरी दुई केसहरुमा गरिन्छ।
अस्थायी रूपमा एक वा बढी अवास्ट शिल्डहरू असक्षम गर्नुहोस्
यस अपरेशनलाई पूरा गर्न हामी निम्न कार्यहरू अघि बढ्छौं:
पहिलो हामी अवास्ट प्रोग्राम खोल्ने छौं डेस्कटप प्रतिमा वा सुरु मेनूबाट डबल क्लिक गरेर।
अर्को, जब इन्टरफेस प्रकट हुन्छ, हामी ट्याबलाई हेर्नेछौं "सुरक्षा"माथिल्लो बाँयामा अवस्थित छ, र हामी क्लिक गर्नेछौं।
देखा पर्ने मेनुमा, हामी विकल्प छनौट गर्दछौं Ic मूल ढाल ».
क्लिक गरिसकेपछि, हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा स्थापना गरेका सबै अवास्ट शिल्डहरू पर्दामा देखा पर्नेछ। निस्क्रिय विकल्प प्रत्येक आईकन अन्तर्गत छ।
विकल्प "अक्षम" राखेर फेरि हामी देखाइनेछौं चार अस्थायी विकल्पहरू माथि उल्लेखित (१० मिनेट, एक घण्टा असक्षम गर्नुहोस्, कम्प्युटर पुनःस्टार्ट नगरेसम्म वा स्थायी रूपमा)।
निष्क्रियतालाई अन्तिम रूप दिनु अघि, अवास्टले हामीलाई फेरि एकपटक सोध्नेछ यदि हामी चयनित शिल्डलाई असक्षम गर्न अगाडि बढ्न निश्चित छौं। तार्किक रूपमा, हामी "हो" बटन थिच्नेछौं।
यदि हामी धेरै निश्चित छौं कि हामी कहिल्यै निश्चित शिल्ड वा कुनै विशिष्ट अवास्ट कम्पोनेन्ट फेरि प्रयोग गर्ने छैनौं भने सबैभन्दा तार्किक कुरा हो। स्थायी रूपमा यसलाई हटाउनुहोस्। अझै पनि, यो रोक्न र अभिनय अघि थोरै सोच्न राम्रो हुन्छ, किनकि यस अपरेशनको पछिल्तिर जानको लागि छैन। यसलाई अनडू गर्ने एक मात्र तरिका प्रोग्रामलाई स्क्र्याचबाट पुन: स्थापना गर्नु हो।
स्थायी रूपमा एक वा बढी अवास्ट शिल्डहरू असक्षम गर्नुहोस्
तर यदि हामी यसका बारे स्पष्ट छौं, तब तपाईंको कम्प्युटरको शील्ड र कम्पोनेन्टहरूको श्रृ series्खलाको लागि उचित कार्यको त्याग गर्नु उचित होइन जुन हामीले कहिल्यै प्रयोग गर्ने छैनौं। तिनीहरूलाई सँधै मेटाउन उत्तम। हामीलाई मद्दत गर्न र हामीलाई यस कार्यमा मद्दत गर्न, अवास्टको पछिल्लो संस्करणहरू समावेश गर्दछ विकल्पले छनौट तपाईंको मोड्युलहरू केहि हटाउन.
यो कसरी गरिन्छ हेरौं:
अघिल्लो प्रक्रियामा जस्तै, पहिले यो आवश्यक हुनेछ मुख्य अवास्ट इन्टरफेस पहुँच गर्नुहोस्.
त्यहाँ हामी बटनमा क्लिक गर्नेछौं "मेनू" त्यहाँबाट मेनू पहुँच गर्न स्क्रिनको माथि दायाँ अवस्थित। "विकल्पहरू".
अर्को चरण भनेको बाँया पट्टि "सामान्य" शीर्षक भएको ट्याब पहुँच गर्नु हो।
त्यहाँबाट, हामी पहिले यसको विकल्प चयन गर्नेछौं "समस्या समाधान" र त्यो पछि "घटक थप्नुहोस् वा परिमार्जन गर्नुहोस्".
त्यसोभए एक नयाँ विन्डो हाम्रो आँखा अगाडि देखा पर्नेछ जहाँ अवास्ट एन्टिभाइरस कम्पोनेन्टहरू र उपलब्ध ढालहरू सबै पढ्ने छन्। हामी उनीहरूलाई सावधानीपूर्वक छनौट गर्छौं जुन हामी सक्रियता मार्क हटाएर मुक्त हुन चाहान्छौं र बटन थिच्नुहोस् "परिमार्जन गर्नुहोस्" परिवर्तन प्रभावको लागि।
शिल्डहरूको संवेदनशीलता परिमार्जन गर्नुहोस्
अस्थायी रूपमा र स्थायी रूपमा शिल्डहरू असक्षम पार्ने बीच आधा बाटो हो संवेदनशीलता परिवर्तन गर्नुहोस् ती मध्ये पूर्वनिर्धारित मान को सापेक्ष।
उच्च संवेदनशीलताले सुरक्षा बढाउँछ र त्यसैले मालवेयर पहिचानमा गलत सकारात्मकको सम्भावना। यसले धेरै कष्टकर र बेकार नोटिसहरूको परिणाम दिन्छ। यदि यसको सट्टामा हामीले एक संवेदनशीलता चयन गर्दछौं भने, यो सम्भावना कम हुनेछ। संवेदनशीलता कम गर्न तपाईले गर्नुपर्ने छ सेतो मार्कर होल्ड गर्नुहोस् र यसलाई हामी संवेदनशीलता सेटिंग्समा स्लाइड गर्नुहोस् जुन हामी चाहन्छौं.
विचार धेरै उपयोगी हुन सक्छ, तर तपाईं यसको सचेत हुनुपर्छ असुविधा, किनभने हाम्रो संवेदनशीलता घटाएर हामी हाम्रो अवास्ट एन्टिभाइरसको आधारभूत ढालहरूको प्रभावकारिता कम गर्ने जोखिमलाई चलाउँछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » अवास्टलाई कसरी असक्षम पार्ने ताकि यसले तपाईंलाई कष्ट दिँदैन
फेसबुकमा बोल्ड लेख्नका लागि उपकरणहरू
Inton वटा उत्तम विकल्प निजी फाइनान्सको लागि फिन्टनिक